Nzuzo nke na-eto eto zucchini na saịtị: akuku mkpuru osisi na-emeghe na ihe ndi nlebara anya - Mkpụrụ ubi - 2020
Esi na-eto eto zucchini site na nkpuru n'ime ala
Akụkụ bụ isi nke zucchini - njupụta na ịdị mfe. Anyị na-ekwu okwu ọ bụghị naanị gbasara àgwà ndị na-eri nri nke akwukwo nri, ọ bụghịkwa nsogbu ọ bụla mgbe ọ tolitere. Na-ewe ihe ubi n'ubi, ndi oru ubi kwesiri ka ha na aru oru aru ma tinye ihe omuma. Ọzọ, anyị ga-ekwu banyere otu esi eto zucchini n'ụzọ ọma, ndị agbata obi ha ga-ahọrọ, ihe ị ga-esi na-eme ka mmiri fụọ oyi, nakwa ma osisi ọ dị mkpa ịgbara.
Mgbe ịgha mkpụrụ na ala oghe
Esi kwadebe osisi zucchini
Ịhọrọ ebe maka ọdịda zucini
Ọrụ ịkwadebe na saịtị maka zukini
Atụmatụ na omimi nke ịgha mkpụrụ
Otu esi elekọta ezumike na mbara ala
Ọnọdụ irri mmiri
Ịkwụsị na weeding n'etiti ahịrị
Nri maka akwukwo
Mgbochi na nchebe megide pests na ọrịa na nke zukini
Mgbe owuwe ihe ubi na otu esi echekwa ihe ubi
Ịkụ mkpụrụ zucchini na ala oghe
Ịmepụta ụdị ugbo a nke ọma na-adabere na mkpụrụ nke mkpụrụ ahụ, ebe a họpụtara na ọrụ ịkwadebe ihe siri ike. Ọ na-agụnye ịgha mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ, ịkọ ala na inye ya nri. Anyị ga-aghọta ihe niile gbasara nsogbu ahụ.
Lelee ụdị nke zucchini kachasị mma ma na-ewu ewu nke na-eto eto na mba ahụ.
Ozugbo egwu mmiri nke mmiri ozuzo gafeworo, ome ndị enyi nke omenala ndị ọzọ ga-apụta n'ime ogige ahụ, ọ dị mkpa ịkụkụ skwọsh n'ala. Nke a na-emekarị na iri gara aga nke May na mmalite June.
Ndị na-eto eto nwere ahụmahụ na-adụ ọdụ ka ha tụlee aro nke kalenda ọnwa. Ekwesighi ichegbu onwe gi na ebute ugbua. Ọ bụrụ na ị na-enye mkpụrụ na mmiri ma kwadebe ha maka germination, mkpụrụ mbụ ga-apụta n'ime ụbọchị ole na ole.
Ị ma? Ruo ogologo oge, zucchini toro dịka ihe ọkụkụ na-emepụta nanị na greenhouses, ọ bụkwa na Meksiko, na ala nnabata ha, na osisi ahụ na-eri nri. Onye nke mbụ gbalịrị ịnwale ụdị nri ndị Italian niile.
Nsogbu niile nke owuwe ihe ubi n'ọdịnihu na-amalite site na nhọpụta mkpụrụ. Ụfọdụ ndị nwunye na-anakọta ya na akwa ha, ebe ndị ọzọ na-ahọrọ ịzụta ya. Mkpụrụ osisi dị mkpa iji chọpụta maka germination.
Iji mee nke a, a na-etinye ha n'ime ngwọta dị ike nke potassium, mgbe e mesịrị, a na-edebe ihe nyocha ahụ maka ihe dị ka nkeji iri abụọ n'ịgba stimulator. A na-agwụcha ọkwá a site n'ịgba mmiri ma na-ekekọta ọka ndị a họpụtara ahọpụta na akwa na-ekpo ọkụ.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ Zucchini, nke a na-arụrụ n'ụlọ ma ọ bụ zụrụ, ma e wezụga maka ngwakọ, dị mma maka akuku nke afọ 5-8. Izi mma di mma ma di ogologo.
Mgbe mkpụrụ ahụ gwụsịrị, ma ọ kaghị mgbọrọgwụ, ọ na-agbazi maka awa 48 na okpomọkụ nke ihe dị ka 0 Celsius C. Mgbe ahụ, a na-etinye nodule na sill nke ndịda ruo otu izu, jiri mmiri na-ehicha ha oge.
Ihe dị njikere maka ịkụ mkpụrụ mgbe mgbọrọgwụ Ome ruo otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọka na-eto na ya. Ọ bụghị ndi oru ugbo nile na-etinye aka n'osisi nke zucini. A na-eli ọtụtụ n'ime mkpụrụ osisi na-emeghe, nke Kornevin ma ọ bụ Scotland na-elekọta.
Mụta maka nkà na ụzụ na-arụ ọrụ ugbo nke na-eto eto zucchini site na seedlings n'ime ala.
Mgbe ị na-achọ ebe kwesịrị ekwesị maka mkpụrụ osisi ugbo, rịba ama ịdị ọkụ nke zucchini na ihe ndị bụ isi ha chọrọ maka ịkọ ugbo. Ọ ga-adị mma nke ukwuu maka osisi na mpaghara na-emeghe, nke ọma, ebe enweghị ụlọ ma ọ bụ osisi dị nso.
Ọ na-achọsi ike na akwụkwọ nri dị n'okpuru anyanwụ n'ụbọchị dum. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche ebe a na-ahụ maka saịtị ahụ: zere ala ndị dị ala, oyi na ebe ikuku.
Adịla ọsọ ọsọ na atụmatụ ubi ahụ: na nke a, ọ dị mkpa ịghọta, mgbe nke ahụ ọ ka mma ịkụ mkpụrụ skwọsh.
Ndị ọkachamara na-atụle dị ka ezigbo ndị bu ụzọ maka omenala: poteto, ụdị ụdị kabeeji, eyịm, elu, garlic, eggplants, tomato, carrots, beets na agwa. Maka afọ 3-4 ọ dịghị atụ aro ịzụlite ndị nnọchianya nke ezinụlọ ugu n'otu mpaghara ahụ. Ọzọkwa, ọ dịghị mkpa ịgha mkpụrụ, ebe cucumbers na-eto eto.
Ọ dị mkpa! Fọrọ nke nta ka ndị niile dị n'ime zucchini osisi si na-echekwa nwere si adọ ụdị ụfọdụ. Ha adighi adighi nma maka ichikota mkpuru n'afọ ozo.
Mkpụrụ osisi na-adịghị mma na agbata obi ga-eme ka mmepe zucchini mepụta. Nke a bụ n'ihi na ọka ndị ahụ dị na ala dara ada, ọzọkwa, ebe obibi na-adịghị mma na-anọgide site na ndị bu ụzọ.
Na enweghị ikpe ị ga-akụ ihe ndị melons na watermelons nso zucchini. Ugbo na ihe ndi ogwu di iche iche nwere ihe ndi ozo kwesiri ihe oriri na otu ihe omuma. N'ihi nke a, ị ga-enweta ezigbo ihe ubi na akwa abụọ ahụ.
Ọ bara uru ịmụta banyere iwu nke ịkụ skwọsh n'ala.
Ihe dị mkpa ka a rụọ na saịtị ahụ tupu akuku adabere na njirimara physico-chemical nke mkpụrụ na ya. Ọtụtụ n'ime ajụjụ banyere ụdị ala a chọrọ maka zucchini, na-enweghị oge, zara: "Ọkụ." Nke a bụ ihe dị mkpa dị mkpa, n'ihi na ebe dị oyi na mkpụrụ osisi agaghị eto, mana ọ bụghị isi. Akpa, kpebie ihe mejupụtara ala na ubi ma dozie ya na nri.
Ị ma? Squashes nwere mmetụta diuretic, mee ka sodium salts dị n'ahụ, mee ka ọrụ eriri afọ ahụ dịkwuo mma, meziwanye usoro metabolic na mgbaze.
Ọ bụrụ na ị nwere:
Peatlands. Tinye ngwakọta nke 2 kilogram nke compost (ị nwere ike dochie ya na humus), 1 bọket nke ala ala, 1 teaspoon nke superphosphate, 2 tablespoons nke osisi ash, 1 teaspoon nke potassium sulfate kwa square mita. Mgbe ahụ, gwuo ebe dị omimi nke 20 cm, larịị na azu na moisten ya na Ross ma ọ bụ Agricola-5 nri mmiri. A kwadoro ngwọta ọrụ site nchịkọta nke 1 tablespoon nke ọgwụ na ịwụ, kpụ ọkụ n'ọnụ ruo ogo 40, mmiri. Ná ngwụsị nke polyethylene cover bed, nke na-anọgide na mmiri na okpomọkụ.
Loam ma ọ bụ ụrọ ala ụrọ. N'okwu a, iji dozie mkpụrụ ahụ, tinye 1 n'arọ nke peat, humus, sawdust, nakwa 1 tablespoon nke ash na superphosphate kwa 1 square mita.
Tụlee. Tupu ị tinye zucini n'ime ụlọ ndị dị na mkpụrụ dị otú ahụ, gbakwunye ịwụ nke loam, peat, 4 kilogram nke humus na nke ahịhịa, tinye 30 g nke ash na superphosphate.
Ala ala na-adọrọ adọrọ. Na saịtị ahụ ga-adị mkpa ịtọghe ma na-eri nri nke 2 kilogram nke sawdust, 60 g nke osisi uyi, 30 g nke superphosphate.
Mpaghara a na-emepebeghị emepe. Ala dị n'ógbè ndị a chọrọ nlezianya egwu ala, ahịhịa mkpocha na ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ site na mgbọrọgwụ. Ya mere, mgbe ị na-emepụta atụmatụ ọhụrụ, nke mbụ tinye 2 kilokọ nke compost, 60 g ash, 30 g nke nitrophoska. Mgbe ahụ gwuo ala, tinye ọgwụ ngwọta nke Ross, ma ọ bụ Agricola-5.
Ị ma? Ndị ọkà mmụta sayensị egosila na ndị na-eri nri zucchin mgbe nile anaghị eme ka isi awọ ghọọ isi awọ. Nke a na-eme site na ịmalite nke melanin, nke bụ maka ntutu isi mmiri.
Nkà na ụzụ nke zucchini na-emepụta n'ọhịa na-enye ohere dị anya n'etiti osisi ndị agbata obi. A na-agwa ndị na-eto eto ọkachamara ịlaghachi na e nyere ahịrị 1 mita ma hapụ ọkara mita mita. A ghaghị ịgha mkpụrụ na ala mmiri mmiri, ọkacha mma na igwe ojii ma ọ bụ n'ụtụtụ.
Ụlọ na-eme ka ọ ghara imerụ ahụ, kama obosara. Tinye ngwakọta ala na ala na ọgwụ ọgwụ Effekton (1 tablespoon nke ọ bụla onu), kụrụ nsannsan nke 2 - 3 cm, 3 grains.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji zọpụta ihe ọkụkụ si na ntu oyi, a na-ekpuchi ahịhịa na hay, agrofibre, ihe nkiri, ma ọ bụ ịkpụ karama (osisi ọ bụla iche).
Nlekọta ogige ubi squash nke na-esote n'ubi bụ oge atọ, nri na weeding. Anyị ga-aghọta ihe niile n'usoro.
A na-arụ skwọsh naanị na mgbọrọgwụ, n'ihi na mmiri na epupụta ekwesịghị ịda. Tupu ọdịdị nke okooko osisi, ọ na-achọsi ike ime otu ugboro n'izu, ma mgbe e guzobere ovary ahụ, a ghaghị okpukpu abụọ mmiri. N'okpuru ohia ọ bụla, ọ dị mma ka ị wụsa si na mmiri 5 ruo 10 nke mmiri ọkụ.
Na-agbokọta mmiri maka mmiri ogbugba tupu oge eruo, ma ọ bụghị ya, ị ga-ekiri nza nke rere ure na ala. Echefula ya - oke okpomoku na-ekpughe mgbọrọgwụ usoro zucchini, nke na-eduga n'ọnwụ ya. Iji chekwaa osisi ị chọrọ nchịkọta ala nke peat na compost. O zuru ezu iji wunye akwa akwa dị elu ruo 5 cm gburugburu ohia.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ogige ahụ anaghị aṅụ aṅụ, na oge zucchini na-agbanye zuru ezu, wepụta okooko osisi nwoke, wepụsịsị ya ma tinye otu pestle n'ime nwanyị. Ya mere ị nwere ike pollinate ruo 3 stamens.
Maka ala, yana osisi ndị ọzọ, ala ala dị n'ubi dị mkpa. Ọdịdị na-esi ísì ụtọ agaghị enwe ike ịzụlite, ma ọ bụrụ na ọ ga-ewepu nri ndị na-eto eto na-eto eto. N'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa ịgwọ ebeala dị n'etiti ahịrị oge ma jiri aka wepụ ahịhịa na-adịghị mkpa site na bushes.
N'otu oge ahụ, ndị ọkachamara na-atụ aro ka ha ghara ikpochapu ma ọ bụ tọpu ala ozugbo n'okpuru zucini. Na ihe niile n'ihi na omenala dị n'elu, na omume ọ bụla nwere ike ibibi ya.
Ngwakọta skwọsh nwere ike ịgbanye mgbọrọgwụ na foliar.
Na oge ị ga - achọ ịme 3 mgbatị:
Amalite ifatilai mmiri tupu ịmalite na-agbaze n'ime mmiri ịwụ, 0,5 lita nke mullein na 30 g nke nitrophoska. N'okpuru ọ bụla ohia wụsara liter nke ngwakọta.
A na-eme usoro na-esonụ mgbe okooko. Maka nke a, a na-mmiri mmiri na mmiri mmiri nke a kwadebere site na lita 10, were ya na 60 g nkụ ash na ọgwụ ọjọọ.
Izucha oge a agwụla n'oge ị na-amị mkpụrụ na ngwọta yiri nke ahụ, naanị na nke a, 2 lita nke fatịlaịza kwesịrị wụsara n'okpuru mgbọrọgwụ ọ bụla.
Ị ma? Na nri, ọ bụghị nanị na mkpụrụ nke zucchini e ji, kamakwa okooko osisi. A na-eghe ha eghe, sie, sie, tinye ya na salads ọhụrụ. Na Gris, a ga-eji osikapa na cheese na-emeso gị, na-esi na petals.
Enwere ike ịchọta ngwa ngwa maka skwọsh na-emeghe oghere n'oge mkpụrụ osisi chara acha. Maka nzube ndị a, a na-eji ọgwụ ọjọọ Bud na Ross eme ihe osisi ahụ.
Umu ogwu na-adi na whitefly, egusi aphid, slug ọgụ. Ha nwekwara ike imetụta site na powdery mildew, ire ere, ebu, anthracnose na bacteriosis. Ka ị ghara ịhapụ ihe ọkụkụ ahụ, ọ dị mkpa iburu mgbochi na oge. Maka ọgụ megide ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ, ndị ọkachamara na-akwado ụmụ ahụhụ (Decis, Aktara, Phosphamide, Metaphos, Bi - 58 New, Karbofos, Komandor).
Iji chebe bushes sitere na fungal na ọrịa na-ebu nje bacteria, a na-eji fungicides (Topsin, Bayleton). Mmiri Bordeaux egosikwa na ọ dị mma. N'iji pesticides, tụlee ndụmọdụ nke ndị na-emepụta ihe na oge nke mbido nke bekee.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhazi ihe niile na-efesa mgbe owuwe ihe ubi.
Ọ dị mkpa! Ya mere, ihe anaghị emepụta akwụkwọ nri ndị ahụ na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme kwa izu, a ga-eji ọla kọpa oxychloride mee ka ose nke zucchini kwaa.
Enweghị oge kpọmkwem maka owuwe ihe ubi zucini. Mkpụrụ osisi na-agbaji n'oge ọ bụla. Ị nwere ike detụ efere mbụ nke akwụkwọ nri ndị a na-adịghị ike n'ime ọkara ruo ọnwa abụọ mgbe ịghasịrị. Ndị na-eto eto na-eto eto nwere nha 15-20 cm dị mma maka ebumnuche ndị na-eri nri, ọ bụkwa naanị mkpụrụ ndụ zuru oke ga-adị mkpa maka nchekwa oyi. Ị nwere ike ịmata ọdịiche dị na ha site n'aka ndị na-eto eto site na oké, siri ike impenetrable jikọrọ ọnụ.
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụlọ na-apụnara mkpụrụ osisi ahụ, ebe ha na-emebi nnukwu ihe. Ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ ka a na-ewe ihe ubi na mma dị nkọ. A na-ebipụ obere ụmụaka na-eto eto na isi, ma tozuru okè - tinyere osisi ahụ. A na-eme nke a ka e wee chebe mkpụrụ osisi ahụ n'oge oyi.
Gụọ banyere ntụziaka kachasị mma na ụzọ nchịkọta zucini maka oge oyi, ma echefukwala ịkwadebe ha na garlic garlic, apricots, dogwood, cranberries, akwụkwọ nri, ose, skwọsh, gooseberries, tomato, viburnum, ọcha mushrooms, mmiri ara ehi mushrooms.
A na-atụ aro ka ị nọgide na Zelentsy na refrjiraeto ruo ihe karịrị ụbọchị 14, ma zucchini tozuru okè nwere ike ịgha ụgha ruo ọnwa isii na-enweghị mmebi. Isi ihe maka nke a bụ ịchọta ha ụlọ akọrọ ma dị jụụ nke nwere ezigbo ventilashion. A na-ekpuchi ihe ubi nile na igbe osisi, nke ala ya na pine sawdust na-ejikọta ya. N'okwu a, mkpụrụ osisi ekwesịghị imetụ ibe ha aka. Na iji gbochie ịbanye n'ime ụmụ nje nje bacteria na nje bacteria, ọtụtụ ndị na-etinye ụdị stalk ahụ dum n'ime paraffin na-ekpo ọkụ.
N'ebe obibi obodo, ọ ga-ekwe omume ịchekwa zucchini zuru oke n'oge oyi na mbara ihu ma ọ bụ na friji. N'okwu ikpe a, ọ bụ ihe na-achọsi ike ka ịpị mkpụrụ ọ bụla n'ime polyethylene.
Ọ dị mkpa! Ọ bụghị ihe na-achọsi ike ịchekwa mkpụrụ nke ugu kụrụ maka ogologo oge, n'ihi na ha efunahụ uto ya, na nso mmiri ahụ, mkpụrụ n'ime ahụ malitere ịmalite.
Dịka ị pụrụ ịhụ, zucchini anaghị achọkwu ọnọdụ maka ibu na mkpụrụ osisi. Idebe iwu nke ọrụ ugbo mbụ, ị nwere ike inweta oke ihe ubi. Azu ole na ole na-ezuru ezinụlọ ndị na-eto eto Zelentsov nri ma na-eme ụdị nkwadebe dị iche iche maka oyi.